LibreOffice: sida loogu daabaco xaashiyaha dhaadheer Calc | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan inbadan isticmaalaayay LibreOffice, waxaanan ogaaday in inbadan oo ilashaqeeyeyaal ah "ay kudhacayaan" su'aalaha fudud ee kusaabsan isticmaalka LibreOffice. Waxaa macquul ah maxaa yeelay waxay barteen inay wax walba ku qabtaan qalbiga MS Office oo ay hadda "lumeen".
Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaaday in taxanayaal yaryar oo taxane ah oo ku saabsan sida waxyaabaha qaarkood loogu sameeyo LibreOffice ay waxtar weyn u yeelan karaan bulshada. Waxyaabaha kale, maxaa yeelay ka guurista MS Office ee LibreOffice waxay noqon kartaa talaabada ugu horeysa ee Windows looga tago wanaag.
Fursaddan, waxaan ku soo bandhigayaa fiidiyoow kooban oo sharraxaya sida loo beddelo miisaanka xaashiyaha isweydaarsiga si uu ugu habboonaado hal ama in ka badan oo bog ah. Sidoo kale, laga bilaabo yapa, waxaan soo bandhigayaa sida loo sameeyo saf ama tiir ku soo noqnoqda mid kasta oo ka mid ah go'yaasha.
Haddii aad u aragto casharradan noocan ah inay waxtar leeyihiin, ha iloobin inaad ka tagto faalladaada xagga hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » LibreOffice: sida loogu daabaco xaashiyaha dhaadheer Calc
Shaqo wacan. Farxad
Jawaab gonzalezmd (# Bik'it Bolom #
Mahadsanid! Waxaan is idhi waa talo fiican "isbuucaan".
Faa'iido iyo raaxo leh.
tabaruc wanaagsan waxaan ku jiraa tahriibka msoffice ee Libreoffice talooyinkaasina waxay ku dhacayaan timaha.
Wanaagsan! Waan ku faraxsanahay inay u adeegto oo ay xiiso leedahay! 😉
Waan jeclaa casharka, aad buu aniga ii anfacayaa. Sii wad.
Ka sokow ... Ma ogtahay waxa dhacdooyinka barnaamijka bilaashka ah ee ka jira Lima?
Williams Campoa dijo
Liiska tilmaamuhu waa mid aad u wanaagsan, runti aad u shaqeynaya goorta ay tahay inaad ku daabacdo mushahar bixinta ardayda qaab horay loo sii qorsheeyay. salaanta iyo sugitaanka talooyin dheeraad ah.
Jawaab Williams Campoa
Tutorial aad ufiican mahadsanid!
Waxay ii timid luul, runta. Waxaan rabaa inbadan!
Waad ku mahadsantahay wadaagida ifafaalaha.
Runtu waxa ay tahay, ma haysan kartid figrad fiican. Markaad go'aansato, ka guurista MsOffice una guurista LibreOfice waxay noqon kartaa tallaabada ugu horreysa ee isbeddel weyn.
Anigu waxaan ahay isticmaale Calc weyn waana tan aniga igu fiicantahay.
Taasi waa sax ... habsiin weyn!
Wax ku biiris aad u wanaagsan 😀
Adiguba waad ku mahadsantahay sida wanaagsan ee aad u qortay "heer sare"
Maqaalka iyo barashada fiidiyowga waa kuwo aad u fiican.
Tan iyo markii aan isticmaalayay MS Office ilaa iyo Offce 97, runtu waxay tahay in LibreOffice 97 ay ii keentay nostalgia.
Baruhu aad buu u fiican yahay.
Aragti ahaan LibreOffice 4.2. SIDEBAR ayaa diyaar noqon doonta.
Eliotime miyaad jeceshahay LIbreOffice oo leh Sidebar? .
Mise wali waxaad u maleyneysaa in balastarka isdhexgalka ee GNOME iyo KDE uusan ku filneyn?
Waan dhaqaajiyey isla markii ay soo baxday LibreOffice 4.1, runtu waxay tahay inay aad uga garasho fiican tahay MSbar dhinaceeda.
PS: Peru waa mid ka mid ah waddamada aan weli ka tegin teknoolojiyadda Microsoft.
Waxaan ku jiray FACEBOOK iyo CLIX CNN.
Koox ka kooban dad ka yimid Latin America, waan kuu dhaaranayaa laakiin maaha inaad ku hadasho xumaanta reer Peruvians, laakiin waxay ahaayeen kuwa ugu difaacay Microsoft, Office, Windows 8.
Kaftan ma sameyn karno, hubaal qaar reer Peru ah ayaa u boodaya inay difaacaan MS $ $ $ $ $ $ $.
Microsoft waxay umuuqatay inay lacag siisay.
Oo waxaan u maleynayay in dadka reer Chile ay ka cagajiidayaan inay soo galaan barnaamijyo bilaash ah.
Ma aaminsani taas, maahan in dadka reer Peru ay daneeyaan isticmaalka MS, ee waa uun inaan nahay dad caado leh, oo haddii aan iskuulka ka baranay inaan adeegsano MS waxaan u isticmaali doonnaa dhimasho, dabcan marwalba waxaa jira dad hal sabab ama mid kale ayaa maskaxdaada u beddeleysa. Ma ahan wax aan macquul aheyn laakiin wey adagtahay.
Taasi waa run, waxayna ahayd habkaas oo aan ugu bartay isticmaalka Debian iyo aalado gaar ah oo bilaash ah.
Laf ahaanteeda, xitaa waxaan la qabsanay cunista xitaa bakhaarada.
heer sare! kiiskeyga sidaan u qasbay…. Waxaan ula jeedaa, waxaan wacdiyay qaar ka mid ah inay aadaan libreoffice, mararka qaarkoodna waxay i weydiiyaan waxyaabo sidaas oo kale ah, aad ayaad ugu mahadsantahay macluumaadka!
Hagaag, hadaad joogtid Lima, waxaad ku xanuunsaneysaa Saldhigyada Laanqeyrta si loogu wacdiyo isticmaalka LibreOffice.
Wanaagsan !!! Aad baad u mahadsantahay ..
Waxaan horeyba u lahaa inaan baabi'iyo sida 3 faallooyin faallooyin ah oo u imid inay dhahaan "aan daacad ahaano, markaa haddii xafiiska MS uu kun jeer ka fiican yahay" -_-
BTW, wanaagsan Pablo, way ii adeegtaa maadaama aadan wax fikrad ah qabin
Haha! Wanaagsan Waan ku faraxsanahay inay waxtar leedahay. Tani waxay igu dhiirrigelineysaa inaan sameeyo casharro badan oo ku saabsan LibreOffice mustaqbalka.
Ka takhalusida trolls waa shaqo adag.
Guud ahaan sida ku xusan taxanaha casharrada yaryar ee LO / AOO Pablo, sida had iyo jeer aad u muuqata!
Macallin fiican, wax badan ayey iga caawin doontaa kulliyadda.
Umeerin heer sare ah, wax badan ayey iga caawin doontaa kulliyadda.
Sidee la yaab leh, mar labaad ayaan faallo ka bixiyay maxaa yeelay midkii hore lama daabicin.
Waa inaan qiraa in libreoffice-ka ay wax badan soo hagaagayaan oo aanan jeclayn qolalka xafiiskan, waxaan ahay dib u difaaca MSOFFICE. Hagaag mawduuca muuqaalka cusub waxaan dhihi lahaa waxay noqon laheyd mid qatar ah laakiin waxay isku dari karaan shaqooyinka qaar badhan gudahooda, sida daaqadaha windows iyo daawadeheeda. Aniga kaliya ayaa ii hartay inaan sifiican ugu idhaahdo kuwa horumariya libreoffice, wali waxaan kuxirannahay msoffice laakiin sidii hore oo kale, hada qofkasta wuxuu siin lahaa suulka ilaa gnu / Linux iyo xirmada xafiiskeeda.
Xaqiiqdii waxaan u muuqanayaa mid ku qanacsan sida qanacsanaanta nidaamkani ii yahay, gaar ahaan xafiiska libre, xafiiska jajabka xafiiska iyo xafiisyada lire, waxayna i siin doontaa qanacsanaan badan haddii aad ii soo dirto buug haddii ay waa la heli karaa
Cashar wanaagsan. Waxaan isticmaali jiray GNU / Linux sanado laakiin wali ma isticmaalo Libre Office XNUMX Tan waxaa loogu talagalay waafaqsanaanta Microsoft Office. Si kastaba ha noqotee, beryahan dambe waxaan ku tababaro oo aan barto sida loo isticmaalo si faahfaahsan.
Wanaagsan! Waxaan isku dayi doonaa inaan soo dhigo casharro badan.
Tabobar ku saabsan la shaqeynta dukumintiyada XML ee Xafiiska Libre ayaa si weyn loo qadarin lahaa, ikhtiyaarka ah in si toos ah loo soo saaro arrimo ayaa la seegay.
Ku jawaab lo4all
Aniga pe dijo
Faalladaydu waa si loo aasaasay iyadoo aan shaki ku jirin in LibreOffice ay bixinayso socodkii la filayay marka la barbardhigo MS Office, hase yeeshe, markaan dib u eegno arrinta xirmooyinka xafiisyada ee ka go'doonsan xaqiiqada isku xirnaanta iyo wadaagga faylalka urur, waanu qaldanahay.
Waxaan u maleynayaa in LibreOffice ay tahay inay xoojiso arinta la jaanqaadka feylasha uu abuuray Ms Office maxaa yeelay su'aasha ah ka guurida midba mida kale maahan oo keliya shaqadeeda laakiin maxaa yeelay kuwa kale ayaa kusii socon doona MS Office iskood iskaga tagaya xafiis xumo.
Waan ku raacsanahay. Sidoo kale, waxaan la kulannaa dhibaatada digaagga iyo ukunta. Waa run in iswaafajinta weyn ay ka doorbideyso in waqti looga lumiyo howlo cusub. Si kastaba ha noqotee, si loo hubiyo is waafajin wanaagsan, WAA IN LOO BAAHAN YAHAY in lagu daro (ugu yaraan) isla shaqeynta MS OFFICE. Taasna, dhammaanteen waan ognahay, LO wali way maqan tahay.